Antonie Griezmann Oo U Deyriyay Manchester United Islamarkaana Atletico U Farmuuqay Xiddiga Uu Doonayo Inuu Ka Garab Ciyaaro - Laacib.net
Antonie Griezmann Oo U Deyriyay Manchester United Islamarkaana Atletico U Farmuuqay Xiddiga Uu Doonayo Inuu Ka Garab Ciyaaro
Antoine Griezmann ayaa shaaca ka qaaday inuu u heelan yahay Atletico Madrid, waxaana uu doonayaa inuu arko kooxda oo la soo wareegta weeraryahanka Paris Saint-Germain Edinson Cavani.
26 jirkaan weerarka ka ciyaara ayaa lala xiriirinayay Manchester United iyo Real Madrid iyo kooxo kale oo Yurub ka dhisan, laakiin waxa uu beeniyay wararka sheegaya inuu raadinayo inuu ka tago Atletico.
“Haa, halkaan ayaan raaxo ku dareemayaa, madaxa Atletico Miguel Angel Gil waa inuu la hadlo wakiilkeya, waxaana arki doonaa waxa aan aan sameyn karno laakiin kama fekero wax ka dheer kulanka soo socda” ayuu Griezmann u sheegay Cadena Ser.
“Waan sii joogayaa Atletico sababtoo ah waan faraxsanahay. Haddii aan ku faraxsanahay nolosheyda gaarka ah, waan ku farxi doonaa shaqadeyda. Waan jeclahay tababare Simeone, waana jeclahay saaxiibadeyda.
“Waxaan doonayaa koobab, waa waxa aan doonaya waana waxa iga maqan. Ma ahan abaalmarino shaqsiyadeed laakiin koobab aan la qaado kooxda.
“Waxaan dooneynaa inaan horumar sameyno, waana sameyn doonaa inta uu joogo tababare Cholo iyo asxaabta kale ee kooxda.
“Waan jeclahay Edinson Cavani. Waxa uu leeyahay qaab ciyaareedkeena. Waa xiddig reer Uruguay, dadaal badan ayuuna ku bixiyaa kubad walba. Saxiix weyn ayuu u noqon lahaa Atletico. Laakiin waan arki doonaa waxa dhici kara.
“Mustaqbalkeyga kuma xirna Cholo. Uma maleynayo in haddii uu baxo inaan bixi doona. Waa run sannadkii hore inaan wacay ka hor inta aanan qandaraas cusub saxiixin sababtoo ah waxaan doonayay inaan la sii shaqeeyo isaga.
“Kooxda ayaa u baahan, anigana waan arkay inaan u baahanahay.”